November 2020 - Bright News
ယနေ့ခေတ်အတွက် အနည်းငယ် အထူးအဆန်းဖြစ်နေမယ့် အတိတ်ကာလက ထူးဆန်းသောတီထွင်မှုများ
ယနေ့ခေတ် မှာ နည်းပညာအသစ်အဆန်းများကို အလျင်အမြန်ထုတ်လုပ်နေကြပြီး အရင်မျက်‌ မှောက်ခေတ်ကလို ရယ်စရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်ပျက်များဟာ ခေတ်ကုန်ခဲ့ပါပြီ။ သို့သော် အရင်တုန်းက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာများကို ကြည့်ဖို့ အရင်ချိန်တွေကိုပြန်သွားလိုက်ရအောင်။ (၁)Pueblaမြို့ရှိ Palafoxiana စာကြည့်တိုက်တွင် သုတေသီတစ်ဦးဟာ စာအုပ်ခုနစ်အုပ် ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖွင့်နိုင်တဲ့ နှစ် ပေါင်း(၃၀၀)သက်တမ်း ရှိတဲ့ ကိရိယာတစ်ခုကို […]
သင်တို့ မမြင်ဖူးသေးတဲ့ နာမည်ကြီး လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများရဲ့ ပထမဆုံး ထုတ်ကုန်များ
ယနေ့ခေတ်အချိန်ကာလမှာ Apple သို့မဟုတ် Samsung တို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို မမြင်ဖူးတဲ့သူ မရှိသလောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ သို့သော် ထိုပစ္စည်းတွေရဲ့ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ချိန်က ပုံစံတွေကိုတော့ မတွေ့မိကြသေးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ယခုတစ်ခါမှာတော့ ကမ္ဘာပေါ်က နာမည်ကြီး ကုန်ပစ္စည်းများရဲ့ မူလစတင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ချိန်က ပစ္စည်းများရဲ့ အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ၁။ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး […]
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျက်စိအရှေ့မှာတင် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အံ့ဩစရာကောင်းလှတဲ့ အရာများ – ဓာတ်ပုံ (၂၄)ပုံ
ကျွန်ုပ်တို့တွေဟာ ဘဝကိုတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ ရိုးရှင်းစွာဖြတ်သန်းနေကြပြီး ကျွန်ုပ်တို့ပတ်၀န်းကျင်၌ ဘယ်လိုမျိုးအံ့ဩဖွယ် ကောင်းလှတဲ့အဖြစ်အပျက်များ ရှိနေသည်ကို မသိကြပါဘူး။ ကံကောင်းတာက တချို့လူတွေက ဒီလိုစိတ်၀င်စားစရာ အံ့ဩစရာများကို ဓာတ်ပုံရိုက်ဖမ်းယူပြီး အွန်လိုင်းမှာ မျှ‌ဝေလေ့ရှိတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ (၁) ပန်းပွင့်တစ်ခုမှာ ထိုလိပ်ပြာနားလိုက်ပါက ပန်းပွင့်ကြီးတောင် ပျက်စီးသွားနိုင်လောက်ပါတယ်။ (၂) လူရဲ့ နှလုံးပုံစံ […]
နေရာမရွေးဘဲ ပုံစံအမျိုးမျိုးအိပ်တတ်ကြတဲ့ ချစ်စရာကလေးများရဲ့ဓာတ်ပုံများ
ကလေးအများစုဟာတစ်ချိန်လုံးထကြွလှုပ်ရှားနေတတ်ပြီးဘယ်အချိန်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုလည်းသင့်အနေနဲ့ခန့်မှန်းရခက်ခဲပါတယ်။အနည်းငယ်ဆိုးသွမ်းတဲ့ကလေးတွေလောက်ကသာ အိမ်ပတ်လည်များပြေးလွှားဆော့ကစားရင်းအိမ်နီချင်းအိမ်တွေကိုလျောက်သွားကာမိဘတွေရဲ့မျက်စိအောက်ကနေပျောက်ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ဒီဆောင်းပါးထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ကလေးတွေကတော့ အရုပ်တွေကြားထဲမှာအိပ်နေတာ၊အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ဘေးမှာအိမ်နေတာနဲ့အခြားမထင်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာအိပ်ပျော်နေကြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၁) သူမကတော့ လုံးဝဘက်ထရီ ဒေါင်းသွားပါပြီ (၂) ယုံမလားတော့မသိဘူး၊ ကစားရတာက အတော်ကိုပင်ပန်းတဲ့အလုပ်ပါ (၃) ဒီကလေးကတော့ကြောင်ဝင်စားတာဖြစ်ရမယ် (၄) ဒီလိုပါရမီရှိဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူပါဘူး (၅) ဒီကလေးကတော့ ညဘက်အိပ်ယာထဲ ကောင်းကောင်းမအိပ်ဘဲ ဘယ်မှာအိပ်နေလဲကြည့်ပါအုံး (၆) ငါ့ရဲ့ခွေးကတော့ ငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံးခေါင်းအုံးဘဲ (၇) သူလည်းဈေးဝယ်ရတာ […]
ကျရာဇာတ်ရုပ်အတိုင်း လုံးဝတူညီအောင် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်များ
ဒီဂျစ်တယ် နည်းပညာမပါပဲ ဖားရုပ်ကနေ မင်းသားအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ မိတ်ကပ်ပညာရှင်များရဲ့ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်များဟာ ယှဉ်ပြိုင်လာနိုင်ကြပါပြီ။ ယခုအခါ နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကောင်များထဲမှာ မယုံနိုင်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်သော အနုပညာရှင်များရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ (၁) Yondu Udonta — Michael Rooker ( Guardians of the Galaxy, […]
လူသားများဟာ အလွန် ဖန်တီးတတ်ကြသောကြောင့် သူတို့၏ပတ်၀န်းကျင်ရှိ လိုအပ်ချက်၊ချို့ယွင်းချက်များစွာကို အမြဲရှာဖွေနေကြပါတယ်။ ထိုအရာအများကြီးထဲကမှ တစ်ချို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေထဲက လုပ်ယူထားတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ တစ်ထပ်တည်းကျကာ ကွတ်တိဖြစ်နေတဲ့ ပုံရိပ်အချို့ကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ‌ (၁) ကုန်တင်ကားရဲ့ အမိုးနဲ့ကွက်တိကျနေတဲ့ လှို‌င်ခေါင်းတစ်ခုရဲ့ အမိုး (၂) ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်နံ့သာ အမှုန့်အမျိုးမျိုးကို ထားရှိသည့်ပုံစံ။ (၃) […]
သဘာ၀တရားကြီးက ဖန်တီးထားတဲ့ အံ့ဩဖွယ်ရာ ရှားပါးဓာတ်ပုံများ- (၂၅) ပုံ
ဒီက‌မ္ဘာကြီးပေါ်က လှပတဲ့ သဲကန္တာရတွေ ‌၊ စိမ်းလန်းတဲ့တောတောင်ရှုခင်းတွေ ၊ ပင်လယ်ပြာကြီးတွေဟာ ယနေ့ခေတ်လူများအတွက် အထူးဆန်းမဟုတ်ကြတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သဘာ၀တရားကြီးက ကျွန်တော်တို့ကို အံ့သြစရာ‌တွေကို ယူဆောင်လာပေးဖို့အမြဲအသင့်ရှိနေပါသေးတယ်။ (၁) လဆန်းတစ်ခုကို အနီးကပ်မြင်ရသော မြင်ကွင်း (၂)ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ အေးခဲနေတဲ့ ရေခဲပန်းလေးများ (၃)နဂါးပေါက်လေးတစ်ကောင်လိုဖြစ်နေတဲ့ ပုတ်သင်ညိုမျိုးနွယ်ဝင်အကောင်တစ်ကောင် (၄)နေရဲ့ဝိုင်းစက်နေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုရိုက်ကူးရာမှာပါလာတဲ့ငှက်တစ်ကောင် […]
မာကျောတဲ့ကျောက်တွေကို ပျော့ပျောင်းတဲ့ အရာတွေလိုပုံဖော်ထွင်းထုထားတဲ့လက်ရာများ-ဓာတ်ပုံ(၁၄)ပုံ
စပိန်ပန်းပုပညာရှင် José Manuel Castro López ဟာ အနုပညာဒီဇိုင်းသစ်များကို တီထွင်ဖို့မကြောက်ပဲ သူ့စိတ်ထဲ သိနေကြအတိုင်းဖြစ်သည်များကို ပြောင်းလဲ တီထွင်ထုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောက်များကို ခဲယဉ်းစွာ သူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ပြီးထုလုပ်ထားသော ကျောက်ပုံသဏ္ဍာန်များမှာ နူးညံပျော့ပျောင်းတဲ့ပုံစံများဖြစ်နေပါတယ်။ အဲ့ပန်းပုဆရာဟာ သူ့ကိုသူ မှော်ဆန်တဲ့ ပန်းပုပညာရှင်တစ်ယောက်ထက်ပိုတယ်လို့ပြောပြီး သူဟာကျောက်တုံးတခုနှင့်တခုဆက်ကာ အသက်၀င်အောင်ဖန်တီးပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Joseဟာ သူ့လက်ရာဖန်တီးမှုကို […]
အဖြူရောင်ဆေးကို သုံးကာရေးဆွဲထားတဲ့ အမိုက်စားတက်တူးများ – ဓာတ်ပုံ(၃၀)
အနက်ရောင်မှင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော တက်တူးဒီဇိုင်းများကို တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ အသားအရည်ပေါ်မှာ မှောင်မိုက်နေတဲ့အရောင်တွေက ကြည့်ရ သည်မှာ pop ဖြစ်လွန်းလှပါတယ်။အဖြူရောင်မှင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတက်တူးများကို သင်တို့အနေနဲ့မြင်တွေ့ဖူးပါသလား?။ထိုတက်တူးဒီဇိုင်းများဟာ မှော်ဆန်ဆန် ဒီဇိုင်း ပုံစံ များ မြင်တွေ့နေရသလိုပါဘဲ။ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. […]
ဓာတ်ပုံကောင်းတစ်ပုံ ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် အခြေနေနဲ့ ‌ ကောင်းမွန်တဲ့ ရိုက်ချက်‌များနှင့် တိုက်ဆိုင်မှု‌တွေ ရှိမှသာလျှင် ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံပညာရှင်များဟာ တခါတရံ ဓာတ်ပုံကောင်းတစ်ပုံကို ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် အချိန်နှစ်ကာလများစွာ စောင့်ဆိုင်းပြီး ဖမ်းယူကြရပါတယ်။ သို့သော် တစ်ချို့ရိုက်ကွက်တွေဟာ မတော်တဆ အပျော်ရိုက်မိရင်းနဲ့ ရရှိတာများလည်း ရှိပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးတွင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရိုက်ချက်များဟာ ပြီးပြည့်စုံသည့် […]
လေယာဉ်၀န်ထမ်းများပြောပြလေ့မရှိတဲ့ လေယာဉ်ပျံ‌ပေါ်က လျှို့ဝှက်ချက်များ